Iifoto ze-10 Couping Kissing - Ukuthandana Imiboniso Yesilayidi
Ukwanga kungathatha ukuphefumla kwakho kude kwaye kungangqina ikhemistri ekhomba kuyoukuhambelana. Ukwanga okufanelekileyo, ngexesha elifanelekileyo, nomntu olungileyo akufani nayo nayiphi na enye into.
Ukumanga kokuqala kuba ziinkumbulo ezimnandi. Kukho ubumsulwa bokwenyani kuloo ntoukwanga kokuqalaoko kuyenza imilingo.
Isibini Esiphuzayo-Ixesha Lokuqala
Okuninzi kukhokelela kolokuqala ulwango-ke xa isenzeka inokuba ngumzuzu omangalisayo. Kwaye ngelixa umntu ngamnye ezisa ulindelo lwakhe koloqabalo lokuqala, xa luhamba kakuhle luyamangalisa.
Ukiss olwebiweyo, olwalelweyo okanye olusongelwa ngobungozi bokubanjwa lunokuonwabisa. Zininzifuna imicimbiqala ngolwanga olunye olubiweyo, ke sukufuna ezi kiss ukuba awufuni kujongana neziphumo.
Kutheni le nto beyibiza njengeUEskimo uyamangaxa izibini zibrusha iimpumlo endaweni yokuthinta imilebe? Kungenxa yokuba amarhe ayanda ukuba ukufuma kokwabelana okwabelwanayo kwi-tundra eqingqiweyo kunokutywina imilomo kunye. Yintsomi okanye yinyaniso? I-Eskimo kisses isemnandi.
Amagama anokukwazi ukuveza inkanuko ngokufanelekileyo, kodwa ukwanga okunothando kunokudlulisa okungaphezulu kokuamagama anganako. Ukwanga ngothando kubonisa umdla kunye nokutsala.
Izibini ezincamisayo ngeKrisimesi zisenokuzisebenzisaMistletoeukuphonononga iimvakalelo zabo. Ngaphezulu kwesibini esitshatileyo esonwabele i-smooch egunyazisiweyo ngeholide yesityalo esixhonyiweyo.
Xa isibini sichazwa njengendoda nomfazi, uhlala ebongozwa ukuba amange umtshakazi wakhe kwaye atywine umanyano lwabo. Abanye abantu abatshatileyo balinda de kube lixesha lokuba babhengezwe njengabatshatileyo ngaphambi kokuba babelane ngokwanga, becaphula umnqweno wabosazana ngconongaphambi kokuzibandakanya kuyo nayiphi na into ebonakalayo.
Ukutshona kwelanga lixesha lothando kwizibini ezitshatileyo kunye nokuncamisana phambi kokutshona kwelanga kunokudala amava ezothando kubo bobabini. Useto luyinto yesibini kumntu omncamisayo, ewe.
Ukuqhawulwa kwabantu abadala
Izibini ezincamisayo ayenzelwanga abantu abancinci okanye izibini ezitshatileyo. Ukwanga, njengewayini, kubudala obungaphezulu kwexesha. Ukukhula kunye nokuqhelana kunokubangela ezinye zezona zilungileyo.
Abo bangena kwiminyaka yabo yegolide kunye nomntu abasafuna ukumanga banethamsanqa ngokwenene.
Abafazi Izihlangu Cocktail Iindlela Zokupheka Intloko Imisebenzi Imiboniso Yeslides I-Ski Areas
leo indoda kunye pisces ukuhambelana komfazi
uyenza njani intlalontle ikuthande
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana isatifikethi sokufa eFlorida
ndiyahlekisa ndiyakuthanda iikowuti zakhe
ucoca njani iindonga ngaphambi kokupeyinta
ukufumana isiqinisekiso sokusweleka kwikhaya labangcwabi